कसरी स्वतन्त्र रूपमा वर्ड मा चित्रण र आफ्नो कागजात चित्रहरु क्रिएटिव अनलाइन
कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक वर्डमा चित्रण गर्ने र तपाइँको कागजातमा चित्रहरू थप्न
लोला करील | | Photoshop, ट्यूटोरियलहरू
वर्डको भर्खरको संस्करणले बहुविध उपकरणहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईंको रेखाचित्र र चित्रहरू थप गरेर तपाईंको कागजातहरू समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरूलाई प्रयोग धेरै सरल छ र, जब तपाईं तिनीहरूलाई ह्यान्डल गर्न सिक्नुहुन्छ, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि ती हुन् बढि आकर्षक पाठहरू सिर्जना गर्न महान सहयोगीहरू र बुझ्नको लागि अझ सजिलो।
यस पोष्टमा म तपाईंलाई मुख्य ड्राइंग उपकरणहरू प्रदान गर्दछु जुन शब्दले प्रस्ताव गर्दछ र म तपाईंलाई केहि दिशानिर्देश दिनेछु ताकि तपाईं तिनीहरूबाट धेरैजसो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ वर्ड मा कसरी चित्रण गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने यस पोष्टलाई नहेर्नुहोस्!
1 उपकरण कोर्नुहोस्
2 थ्रीडी मोडेल उपकरण
3 आकार उपकरण
4 उपकरण आइकनहरू
यो वर्ड उपकरणले अनुमति दिन्छ एक साधारण तरीकाले नि: शुल्क रेखाचित्र बनाउनुहोस्। यसले कम्प्युटरको टच प्यानलमा सिधा आफ्नो औंला स्लाइड गरी स्ट्रोक बनाउने सम्भावना प्रदान गर्दछ विकल्प touch टच प्यानल को साथ ड्र »। अर्को ठूलो फाइदा भनेको स्ट्रोकहरू सारेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
छ ब्रशका तीन प्रकार: पेन, पेन्सिल र हाइलाइटर (वा हाइलाइटर)। सबै कलमहरूको कन्फिगरेसन परिमार्जन गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्दै: आकार र रंग। यदि तपाइँ पेन्सिल थप्नको लागि दिनुहुन्छ भने, तपाइँ नयाँ ब्रशेस थप्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ सबैभन्दा अधिक प्रयोग गर्नेसँग प्यालेट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण नोटहरूलाई अधोरेखित गर्न र पाठका भागहरूलाई हाइलाइट गर्न धेरै उपयोगी छ।
थ्रीडी मोडेल उपकरण
शब्दको साथ तपाईं आफ्नो कागजातमा पहिले नै डिजाइन गरिएका 3D चित्रहरू सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले प्रेस गर्नु पर्छ सम्मिलित गर्नुहोस्> थ्रीडी मोडेलहरू। तपाईले देख्नु भएको छ, तपाईसँग छनौट गर्नको लागि उत्तम किसिम छ, तपाई एक पटकमा एक वा बढी चयन गर्न सक्नुहुनेछ र घुसाउन क्लिक गरेर तपाई त्यसलाई पृष्ठमा थप्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको पाठ र नोटहरूमा तिनीहरूलाई समावेश गर्नु राम्रो विचार हो, विशेष गरी यदि तपाईं त्यस्तो चीजको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जुन कल्पना गर्न गाह्रो छ यदि तपाईंले यसलाई हेरिरहनु भएको छैन भने (उदाहरणका लागि, यदि तपाईं लिथोस्फियरको संरचना वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं के व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने ऊतक को भाग उपकला हो)।
केहि एलिमेन्ट्स फ्रिह्यान्ड ड्रई एक कठिन परीक्षा हुन सक्छ, अझ बढि यदि म जस्तो, तपाईंसँग धेरै चित्रकला सीप छैन। शब्द प्रदान गर्दछ तपाईंको पाठमा पूर्वनिर्धारित आकारहरू समावेश गर्ने सम्भावना। क्लिक गरेर घुसाउनुहोस्> आकारहरू तपाईं एक विस्तृत सूची पहुँच हुनेछ। तपाईं क्लासिक ज्यामितीय आकार, अन्य अधिक जटिल आकारहरू र एर्रोबाट सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको कागजातहरूको अंशहरू देखाउने बेला धेरै उपयोगी हुन्छ।
यो फारम उपकरणसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, यद्यपि सूचीले प्रस्ताव गर्दछ यो अझै अधिक विविध छ, तपाइँ लगभग सबै चीजको लागि आइकनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ! अधिक सजीलो पाउन तपाईले खोज ईन्जिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
वर्ड आइकनमा पहुँच गर्न, तपाईंले थिच्नु पर्छ घुसाउनुहोस्> आइकनहरू, तपाईलाई एक सूचीबाट छान्नुहोस् जुन दायाँ देखा पर्दछ र गर्छ क्लिक गर्नुहोस् en सम्मिलित गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक वर्डमा चित्रण गर्ने र तपाइँको कागजातमा चित्रहरू थप्न
VSCO के हो?
एफिनिटी फेरि एक पटक यसको शानदार कार्यक्रम को 90-दिन परीक्षण प्रदान गर्दै छ र मूल्यहरु मा 50% छूट